Maka: ulawulo lomsebenzi | Martech Zone
Ithegi: ulawulo lomsebenzi
Njengeqabane kwiarhente esebenza neenkampani zeshishini, iintsuku zam ziyinto engacacanga kwaye ikhalenda yam kukungaziphathi kakuhle kwintengiso, kwisicwangciso-qhinga, ukuma, kumaqabane, nakwiintlanganiso zamaqabane ezingayeki. Phakathi kwazo zonke ezo mnxeba, kuya kufuneka ndenze owona msebenzi ndizibophelele kuwo nabathengi, nawo! Inye into endiyenzileyo ngokwam kwixa elidlulileyo kukuvalelwa nje ixesha kwikhalenda yam ukuqinisekisa ukuba ndi
I-Zenkit: Lawula imisebenzi kuyo yonke iQela, izixhobo kunye neenkampani
NgoMvulo, Matshi 16, 2020 NgoLwesine, Aprili 1, 2021 Douglas Karr
Ukusukela oko ukuvalwa kweWunderlist kwenziwa ngokusemthethweni, abasebenzisi abaninzi bebefuna ngokungxamisekileyo enye indlela. Amawaka sele ebonakalisile ukuphoxeka kwezi zinto zangoku, yiyo loo nto iZenkit igqibe kwelokuba iphuhlise iZenkit Ukwenza abasebenzisi beWunderlist bazive besekhaya. Ayisiyongxaki ukuba ii -apps zabo kunye ne-interface enobuchule ziyafana neWunderlist. Ii -apps zanamhlanje ziluluhlu olulula (njenge-Wunderlist, Todoist, okanye i-MS To Do) okanye ulawulo lweprojekthi oluntsonkothileyo
I-BizChat: Unxibelelwano lweqela kunye nokuBambisana
NgoMvulo, Julayi 9, 2018 NgoMvulo, Julayi 9, 2018 Douglas Karr
Kwasekuqaleni, kwiintsuku zokukhula okuphezulu kwe-ExactTarget (ngoku eyiSalesforce), isixhobo esinye inkampani engenakwenza ngaphandle kukaYahoo! Umthunywa. Ngaphandle kwesigijimi esihlala sihlekisa esathumela umyalezo othi "Ndiyekile" kumqeshwa oshiye ilaptop yakhe ivulekile kwaye wangena, isixhobo besingabambeki ukuba sikhawuleze sinxibelelane nonxibelelwano. Ewe kunjalo, sakuba sifike kumakhulu aliqela abasebenzi, esi sixhobo saba yinto engenakwenzeka kwaye i-imeyile yaba sisixhobo sethu esiphambili… kodwa hayi indlela ekwakubi ngayo.
Ukukhokela iQela lokuThengisa ngeDijithali- Imiceli mngeni kunye nendlela yokuhlangabezana nayo
NgoLwesithathu, uDisemba 28, 2016 NgoLwesithathu, uDisemba 28, 2016 URachel McPherson
Kwitekhnoloji yanamhlanje eguqukayo, ukukhokela iqela elisebenzayo lentengiso yedijithali kunokuba ngumceli mngeni. Ujongene nesidingo sobuchwephesha obusebenzayo kunye nobuchwephesha, izakhono ezichanekileyo, iinkqubo ezifanelekileyo zokuthengisa, phakathi kweminye imingeni. Imiceli mngeni iyanda njengoko ishishini likhula. Indlela ozisingatha ngayo ezi zinto zixhalabisayo igqiba ngokuba uza kugqiba neqela elisebenzayo elinokuhlangabezana neenjongo zokuthengisa ezenziwa kwi-Intanethi. Imiceli mngeni yeQela loThengiso lweDijithali kunye nendlela yokuhlangabezana nayo UkuQinisa uHlahlo-lwabiwo mali olwaneleyo